Dallada waxbarashada Fpens oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed - Caasimada Online
Home Warar Dallada waxbarashada Fpens oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed
Dallada waxbarashada Fpens oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed
Muqdisho (Caasimadda Online) – Waxaa soo ifbaxay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya dallada waxbarashada FPENS, tasoo keentay in heer maxkamadeed ay gaarto, kadib markii bishii Maarso awoodiisii shaqo si sharciga ka baxsan shaqada looga joojiyay Faarax Maxamed Sheekhow, amaarkaasina waxaa fulintiisa lahaa agaasimaha fulinta ee dalladaasi C/raxmaan Cumar Sh. Nuur.
Faarax Maxamed shiikhow waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha dalladda waxbarashada FPENS muddo 8 sano ah waxa uu ka soo qabtay xilal kala duwan .
1. Maamulaha guud ee machadka tababarada
2. Xiriiriyaha hay’ada NRC iyo FPENS 2013-2017
3. Kaaliyaha xafiiska imtixaanaadka
4. Xoghaynta machadka tabarada
5. Xoghayaha xafiiska cilmi baarista
6. Xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka.
Sababta shaqada uu ugu joojiyay Agaasimaha fulinta ee dalladda FPENS C/raxmaan Cumar Sheekh Nuur xubintaasi xilalka kala duwan kasoo qabtay ayaa lagu micneeyay cabsi ka qabay kursigiisa maadama uu yahay shaqsi isku darsaday aqoon karti iyo firfircooni dhanka shaqada ah isagoo dhoor jeer ka dalbaday inuu si gaar ah ula shaqeeyo ugana warbixiyo shaqaalaha kale ee dalladda.
Wuxuu cabasho ku saabsan shaqo ka farisintisa aan awooda sharci lahayn u gudbiyay gudomiyaha dallada FPENS C/qaadir Xasan Axmed kadle isagana wuxuu ku raacay shaqo eryidii Agaasimaha. Sidaas ayuu dacwad uga furtay maxkamadda gobolka madama dastuurkii dallada ay degsatay la-baal maray gabood falna lagula kacay, wuxuuna go’aansaday in sharciga lagu kala baxo muddo 2 bil ayey socotay dacwada ugu dambeyn go’aan ayaa ka soo baxay maxkamadda.
Gudomiyaha dallada FPENS sidoo kale waa milkiilaha shirkadda Somnet xilka dalladda uu ka haayo wuu iskaga magacaban yahay kamana warqabo dastuurka dallada iyo xeerarkeda waana waxa looga guleystay aqoondarada ka haysatay xaga xeerarka ay degsatay dalladda Agaasimaha fulinta isaga ayaa keenay dallada kuma imaan magacaabis gollaha maamulka daladda board of directions oo ka kooban 14 xubnood sida uu sharcigoda dhigayo.
Sida laga sheekay maxkamadda agaasimaha waxa uu xabsiga dhexe ka soo baxay bishii Maarso 2016 sidoo kale April 2016 waxa loo magacaabay Agaasimaha fulinta dallada FPENS isago qariyay in dambi uu galay maxkamadna ay xukuntay waxaana loo haystay baabuur Hilux ah uu lunsaday sidaas fududuna uu kursigas ku helay 2 bil gudohod markii la magacabay wuxuu sameyay shaqo joojin baddan Faaraxna waxa uu ahaa shaqaalihi 5aad uu shaqada ka joojiyo.
Arrintaan ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay cabasho xooggan laga muujinaayay Imtixaanka mideysan ee ay sanadkaan soo rogtay Dalladda waxbarashadda ee FPENS.
Halkaan Hoose ka aqriso warqadaha dacwada iyo go,aanka Maxkamada ka soo baxay.
W/qoray: Cali Muhiyaddiin`